I-ENEJEAN izitya zokuhlamba ezimile?
Impahla yokucoca i-dryer ingakanani imali? Imali engakanani isitya sokucoceka esomileyo ukudibana nathi? Ingakanani i-franchise brand brand drying equipment? Vula abahlambululi abomileyo, kwaye into ebaluleke kakhulu kukutyalomali kwezixhobo zokucoca, ngoko ke, zininzi izinto zokucoca izinto? Qondani i-ENEJEAN yokujoyina iiflanzi zamazwe ngamazwe iinkcukacha ezongezelelweyo nceda uqhagamshelane no-ENEJEAN uhlambe ukuze ujoyine iwebhusayithi esemthethweni !!!!!!!!!!
Njengoko kuyaziwa kubo bonke, iintlobo zendalo yokucoceka eyomileyo kwimarike yokucoca eyomileyo kakhulu, ifuna ukukhetha intlawulo efanelekileyo kunye nekhwalithi efanelekileyo yomgangatho wokusebenza wokucoca umatshini, oomashishini abazi ukuba isakhiwo sokucoca ngokucokisekileyo kubaluleke kakhulu Into ekukhethiweyo kukuba ukhethe ucoceko olumileyo olushushu.
Okokuqala sifuna ukwazi ukuba kukho iintlobo ezintathu zezinga lokugcina izitya zokucoca, ngokulandelanayo, ezincinci, eziphakathi, kunye nezitshixo ezinkulu zokucoca. I-ENEJEAN yezixhobo zokucoca zangomhlaba ezomileyo kwizinto ezisisiseko zifakwe kunye kunye nokukhuselwa kwendawo yokucoca umsi womnto, umatshini wokuvelisa umbane, umshini wokutshabalalisa impahla, ukulawulwa kwamanani ekhompyutheni ezisisiseko zokucoca izinto ezifana nelayt conveyor line, izixhobo zokucoca iinkampani ezincinci, ukucoca izixhobo mhlawumbi zingama-150000. I-Napa igcina ubukhulu abufani nexabiso elihlukile, kodwa, ukuba uqiniseke, ixabiso eliphezulu lezinto zokuhlamba zigcwele ngokupheleleyo, inzuzo iphezulu.
Kwiindawo zokucoca ezomileyo, i-oyile jikelele yokucoca i-oyile iyona nto eyona nto isisiseko sokucoca, i-dryer yomshini, i-ironer, i-generator, insimbi (i-hose yeruba), u-elution womatshini osetyenziswayo, umatshini, umshini wokupaka, i-disinfection cabinet, njl. Kodwa ke zonke izixhobo zokucoca ezinomileyo kunye nezona zibi kakhulu kwiimarike. I-ENEJEAN yezixhobo zokucoca ezomileyo ngamazwe ngamazwe ngokuqinisekisiwe, ukufumana "yi-patent kazwelonke", eChina kunye nangomshishini ophezulu kakhulu we-CS, lo mshini uhlanganiswe ngokupheleleyo kwaye uomatshini wokucoca okhuselekileyo wokugcina amandla.
Inqaku lokugqibela: Izixhobo zefektri zokuhlamba z...
Inqaku elilandelayo: Umatshini wokucoca oomileyo wo...